November 2021 - खबरदारी न्युज
२०७८, १० मंसिर शुक्रबार १८:५४
विराटनगर । विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालमा एक बिरामीले आत्महत्या गरेका छन् । उपचारका लागि भर्ना भएका धनपालथान गाउँपालिका– १ का ३५ वर्षीय शिवकुमार मण्डलले आत्महत्या गरेका हुन् ।
मंसिर ४ गते भर्ना भएका मण्डललाई अस्पतालले मंसिर ७ गते डिस्चार्ज गरे पनि उपचार खर्च १९ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा घर जान नपाएको आफन्त कृष्ण मण्डलले बताए ।
शुक्रबार बिहान करिब ६ बजे अस्पतालबाट हामफालेका मण्डलको उपचारका क्रममा बिहान करिब ११ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले बताएको छ ।
अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष मेहताका अनुसार छारे रोगको उपचारका लागि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । उपचार खर्च ३६ हजार लागेकामा मण्डल परिवारले १९ हजार तिर्न बाँकी अस्पतालले मण्डललाई मंसिर ७ गते डिस्चार्ज दिएको उनले बताए । मण्डलको उपचारका क्रममा ३६ हजार बिल उठेको थियो । सो मध्ये १९ हजार रूपैयाँ तिर्न बाँकी थियो ।
उपचारमा खटिएका नर्सले रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै मण्डलले हामफालेको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत मेहताले बताए । छारे रोगको समस्या देखिएका मण्डलमा मानसिक पनि समस्या रहेको उनले बताए । मानसिक रोग भएकै कारण अस्पतालबाट हामफालेको उनले बताए ।
मण्डलको कुरुवा उनकी सासु बसेकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार सासु शौचालय गएका बेला मण्डलले अस्पतालबाटै हामफालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मण्डलको मृत्यु भएपछि आफन्तले क्षतिपूर्ति माग गर्दै शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कुनैपनि प्रकारको अवरोध बिना सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको हो । राष्ट्रिय जनगणनाको सम्बन्धमा केही आशंकाहरु सामाजिक सञ्जालमा उब्जिएको भएपनि विभागले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी जनगणना कार्यलाई अगाडी बढाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालको जनसंख्या २ करोड ८० लाखदेखि ३ करोडको हाराहारीसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट मंसिर मसान्तसम्ममा जिल्लाको विवरण केन्द्रमा आउने भन्दै उहाँले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विवरण इन्ट्रि गर्न ६ देखि ८ महिना लाग्ने जानकारी दिनुभयो । एक वर्षपछि जनगणनाको रिपोर्टहरु निकाल्न सुरु गर्ने र दुई वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण जनगणनाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाई छ । जनसंख्याको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र आउने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सबैको लेखाजोखा गर्दाखेरी पहिलेको प्रोजेक्शन गरिएको जनगणनाको ३ करोडको हाराहारीको जनसंख्या हो । त्यसको लगभग आसपासमा हामी पुगौँला नभए २ करोड ८० लाख सम्म पुग्छ कि भन्ने अहिलेको प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । यसको इन्ट्रि भइसकेपछि त थाहा हुन्छ, यद्यपी जनगणना सम्पन्न भएको मंसिर मसान्तसम्ममा सबै जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट केन्द्रमा आउँछ । केन्द्रमा आइसकेपछि हामीले तथ्यांक इन्ट्रि गर्ने काम गर्छौ । डाटा इन्ट्रि गर्न छ देखि ८ महिना लाग्ने अनुमान गरेका छौँ । डाटा इन्ट्रि सकिएपश्चात त्यसको रिपोर्ट निकाल्ने क्रम जारी गर्छौ । आजको एक वर्षपछि मात्र नेशनल रिपोर्टदेखि डिटेल्स् रिपोर्टहरु निकाल्ने क्रम जारी हुँदै जान्छ । यो सँगसँगै अबको दुई वर्षमा हाम्रो सेन्ससको इक्टीभिटिज सबै कम्प्लिट हुन्छ । नेपालको जनसंख्याको प्रारम्भिक नतिजा आजको मितिले तीन महिनाभित्र दिन सक्छौँ ।’
महानिर्देशक श्रेष्ठले केही गणकहरुले जनगणनाको समयमा पेन्सिलको प्रयोग गलत नियतले नगरी सुपरिवेक्षकलाई राम्रो अक्षर देखाउनका लागि गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । दुर्गम र पुग्न कठिन ठाउँहरुमा पनि गठकहरुले जनगणना गरेको उहाँले बताउनुभयो । गणकहरु तिङ्कर र छारुङसम्म पुगेर जनगणना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो – ‘मुख्य गणनाको सन्दर्भमा पास उपलब्ध भएको अवस्था रहेन । नरहेपछि हाम्रा साथीहरु मान्छे हिड्ने बाटो नै होइन, जंगल नै जंगलको बाटोमा तीन दिन लगाएर रुखका हाँगाहरु समातेर माथिसम्म पुग्नुभयो । तिङ्कर र छारुङमा पनि सम्पन्न गर्नुभयो । बाटोबाट आफै फर्किन सक्ने अवस्था थिएन । हिजो उहाँहरुलाई हेलिकप्टरबाट सदरमुकाम खलंगा ल्याउने काम सम्पन्न ग-यौँ ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देशभरका सम्पूर्ण भु–भागमा जनगणना सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ । केही विवादित क्षेत्रहरुमा भने कुटनैतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।
यसरि व्यवस्थित होला त डडेल्धुरा बजार
दिपक राज भट्ट (डडेल्धुरा)— डडेल्धुरा जिल्ला सुदुरपश्चिमको सात पहाडी जिल्लाको केन्द्रमा रहेको छ । डडेल्धुरामा हुने दिनहु जसो सडक जामले आम नागरिक हैरान हुने गरेका पाईन्छ । साघुरो सडकमा अव्यवस्थित तरिकाले सडक छेउमा गाडि मोटर पार्किङ गर्नाले दिनहु सडक जाम घण्टौ सम्म रहन्छ । माल बहाक गाडिहरु दिनभर सडकमै पार्किङ गर्नाले यो सम्याको भने हल हुन सकेको छैन् ।
डडेल्धुरामा हुने जामले गर्दा ट्राफिक प्रहरि पनि हैरान बनेका हुन्छन् । डडेल्धुराका एक जना ट्राफिक प्रहरि पाच सय गाडि हेर्न पर्ने व्याध्यता रहेको छ । डडेल्धुराको बागबजार देखि तुफनडाडा सम्म सबै भन्दा बढि जाम हुने गर्दछ । साघुरो सडक माथि रहेका यी खाल्डाखुल्डी मोटर सभारहरु झनै हैरान बन्ने गरेका छन् । खाल्डाखुल्डीले सडकको र्दुदशा बनेको छ । पानी पर्दा सडक हिलाम्य हुन्छ भने ,घाम लाग्दा सडक धुलाम्य हुने गरेको छ ।
सडक चौडा नहुदा आम नागरिक हैरान हुने गरेका छन् । सडक चौडा हगर्नका लागि तीन पटक टेन्डर खुल्यो तर तीनै पटक टेन्डर रद्ध भएको छ । सडक नै डडेल्धुराका राजनीतिक दलका मुख्य ऐजेन्डा भए पनि सडक चौडा भने हुन सकेको छैन । डडेल्धुराको बागबजारमा बसर्पाक व्यस्थित नहुदा यात्रुलाई पनि हैरानी खेप्नु परेको छ । साघुरो बसर्पाकमा गाडी पार्किङका लागि ठाउ नै नपुगने गाडि चालकहरुको गुनासो रहन्छ ।
यसरि होला त व्यवस्थित सडक ः
डडेल्धुरामा सडकको जाम लाई कम गर्नुका लागि व्यवसायीहरुले मालसमान लोड अनलोड गर्ने समय विहान ६ देखि ९ र साझ ५ पछाडि गर्दा टफिक जाम कम गर्नु सकिन्छ ।
मोटर गाडिहरु पार्किङ गर्दा मुख्य सडक मार्ग छेउमा नगरि शाखा सडकहरुमा पार्किङ गरे जाम कम हुने सम्भावना रहेको छ । सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी लाई सम्बन्धित निकायले सडक मर्मत गरे दुर्घटनाको जोखिम पनि निकै कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नगर प्रमुख रावललाई स्वागतको लागि जुत्ता चप्पलको गेट
बाजुरा– त्रिबेणी नगरपालिका ७ का स्थानीयले त्रिबेणी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामसिंह रावललाई स्वागतको लागि जुत्ता चप्पलको गेट बनाएको छ ।
त्रिबेणी नगरपालिका ७ खिरपाटामा आएका योजनाहरुको बजेट काटेको र योजना काटिदिएको बिरोधमा खिरपाटा बासीले बिरोध स्वारुप उक्त योजना बनाएको स्थानियले बताए ।
हामिले मेयरलाई स्वागतको लागि कालो झण्डा जुत्ता र चप्पलको गेट बनाएका थियौ । मेयरले उक्त सूचना पाएपछि नेपाली काग्रेँस बाजुराका सभापती समेत रहेका मेयर रावल जंगलको बाटो हुदै भागेका स्थानीयले बताएका छन ।
त्रिबेणी नगरपालिकाको ६ मा नेपाली काँग्रेसको चियापान कार्यक्रममा जानेक्रममा नगर प्रमुख रावललाई खिरपाटाबासीले बाटोमा जुत्ता चप्पलको गेट र कालो झण्डाले स्वागत गर्ने गरि तयारी थालेको सूचना पछि मेयर रावल भागेका स्थानियले बताए ।
मेयर रावलले वडा पालिकाबाट सिफारीस भएर नगरमा पास गरेका कैलाशमाण्डौ पन्धारा सडक, खिरपाटा खानेपानी योजना, ओखड खोला लगाएतका योजनको ५० लाख बजेट काटिदिएको आरोपमा गाउँबासीले बिरोध गरेको खिरपाटाका स्थानीयले बताएका छन ।
Travel डडेलधुरा बैतडी समाचार समाज
सिमायल गाउँ शोकमाः चालक मालीको उपचारको क्रममा मृत्यु
बैतडी जिप दुर्घटना : सिमायल गाउँ शोकमा डुब्यो
बैतडी–बैतडीमा जिप दुर्घटनामा परी एकै वडाका ५ जनाको मृत्यु भएपछि अहिले गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । जन्ती गएका गाउँका पाँच जना कहिले नफर्कने गरेर अस्ताएपछि अहिले गाउँ नै शोकमा डुबेको स्थानीय कर्णबहादुर चन्दले बताए । उनले भने ‘गाउँका ५ जनाको मृत्यु भएपछि अहिले गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । परिवारका सदस्यहरु विक्षिप्त भएका छन् ।’
जन्ती बोकेको जिप आइतबार राती दुर्घटना हुँदा बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं ६ का ५ जना र जिप चालक समेत गरेर ६ जनाको मृत्यु भएपछि अहिले पुरै वडा शोकमा डुबेको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्रसिंह रावलले बताए । उनले भने ‘वडामा ठूलो दुर्घटना भएको छ । यसले हामी सबै वडावासीहरुलाई दुखित तुल्याएको छ । एकै वडाका ५ जनाको निधन हुँदा गाउँ शोकमग्न बनेको छ ।’
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका २ थलालगाउँबाट जन्ती बोकेर दशरथचन्द नगरपालिका ६ सिमायल तर्फ जाँदै गरेको म १ ज ३१० नम्बरको जिप दशरथचन्द राजमार्गको गोठलापानी–झुलाघाट सडक खण्ड अन्तर्गत दशरथचन्द नगरपालिका ४ कलुवाड मोडमा आइतबार राती दुर्घटनामा परेको थियो ।
सो दुर्घटनामा परेर दशरथचन्द नगरपालिका ६ का ४८ बर्षीय राजेन्द्रबहादुर चन्द, सोही ठाउँका ३८ बर्षीय धनबहादुर चन्द, ६५ बर्षीय प्रेमबहादुर चन्द, ६५ बर्षीय तारासिंह थापा र ५८ बर्षीय खेमसिंह कार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु थियो ।
दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका जिप चालक डडेल्धुराका ४० बर्षीय दीपक मालीको उपचारका लागि धनगढी लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले बताए ।
दुर्घटनामा परेर दशरथचन्द नगरपालिका ६ का ४८ बर्षीय हर्कबहादुर चन्द गम्भीर घाइते भएका र उनको धनगढीमा उपचार भईरहेको छ ।
दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरुको शव आफन्तलाई बुझाईसकिएको छ भने दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरुको दाहसंस्कार पनि गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको आसन्न १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
यससँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्विरोध बनाउने प्रयास असफल हुने देखिएको छ । पछिल्लो समय ओली निकट मात्र होइन, १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेकै कतिपय नेताहरुले समते ओलीको विकल्प नभएको बताएका थिए । तर १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका उपाध्यक्ष रावलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
रावलले ओलीलाई फेरि अध्यक्षमा दाबी नगर्न आग्रह गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री भएर गर्न सक्ने काम गरेको भन्दै उनले भने, उहाँ स्वयंमले केही पहिले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पुनः अध्यक्ष पदमा नदोहोरिने घोषणा गर्नु भएको हो । त्यसको सम्मानका लागि पनि उमेर र सबै दृष्टिकोणले परिपक्क भएकाले मैले अध्यक्षका लागि उग्रसर हुनु उचित सम्भिएको छु ।’
‘ खोले जाँत आज रतेडी भोली दिउसेडी
डडेल्धुराः स्थानीय भाषामा ‘खोले जाँत’ नामले परिचित जगन्नाथ मेला यहि ५ गते रतेडी र ६ गते जाँत(दिसेडी) हुने जगन्नाथ युवा क्लबका अध्यक्ष तारा दत्त भट्टले जानकारी दिए।
अजयमेरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ चिपूरमा पर्ने यो मेला राति लाग्ने मेलालाई ‘रतेडी’ र दिउँसो लाग्ने मेलालाई ‘दिउसेडी’ भनिन्छ। गुनपाल ,चौडी,चिपुर र मड यी चारवटै गाउँबाट जगन्नाथ मन्दिरमा ‘देउरो’आएर मेला हुने गर्दछ।
पूजाआजा पछि प्रसादका रुपमा ‘तिलाख’ ग्रहण गर्ने को बिहानै देखि भक्तजनको भिड लागिरहेको हुन्छ। ‘खोले जाँत’को रूपमा मानिने यो मेला हेर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट श्रद्धालुहरु आउने गर्दछ्न।
साथै संरक्षणका साथ तोकिएका चार किल्लाहरु पुर्वमा राउत कट्टे,पश्चिममा चिपुर न्वाउलो हाटपाट न्वाउलो ,उत्तरमा माहर गडो,हल्कुडा,र दक्षिणमा खिरे चौतारा (मणिलेक) भित्र कसैले गैर कानुनी काम गरेको वा गराइएको पाइएमा देहाय बमोजिमको जरिवाना तिर्नुपर्ने जगन्नाथ युवा क्लबका अध्यक्ष तारा दत्त भट्ट ले जानकारी दिए।
मेलामा रक्सि बेचबिखन गर्ने लाई भने कार्रवाहि हुने भएको छः
१)रक्सी बेच्ने काम गरेमा रु१००००,९२०रक्सी सेवन गरेको पाइएमा रु५०००,२)जुवा तास खेलाएमा रु १००००,४)गाडीमा रोडमै सामान बेच्नेलाइ रु२००० र गाडी मोटरसाइकल पार्किङ स्थल भन्दा अगाडि लेएमा समेत जरिवाना गरिने अध्यक्ष भट्टले बताए ।
देहिजातमा आउने भक्तजनलाई निशुल्क पानी दिदै मल्ल
डडेल्धुरा (दिपकराज भट्ट)ं— सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध शक्तिपीठ डडेल्धुराको उग्रतारा भगवती मन्दिरमा हरेक वर्ष लाग्ने मेला देहीजाँत यस बर्ष बिहिबार रतेडी र शुक्रबार दिउसेडी हुदैछ । कोरोना भाईरस संक्रमण जोखिमले गत वर्ष नित्यपुजामा सिमित देहिजाँत यस वर्ष भने पूर्ण रुपमा हुने भएको छ । जातमा समाजसेवी विनय मल्लले ३० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने घोषण गरेका छन् । मल्ल डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका घर भई हमाल जापानमा बस्दै आएका छन्।
उनी भन्छन धर्म कमाउनुका लागि मन्दिरमै जान पर्दैन माया र सदभावका साथ आफुले सक्दो सहयोग गर्नु नै धर्म हो ।
मल्लले समाजका विभिन्न बिधामा हाल सम्म ४० लाख भन्दा बढि दान गरिसकेका छन् ।
उग्रतारा मेला देहीजाँतमा सबैले व्यवसाय गर्न पाउने
डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध शक्तिपीठ डडेल्धुराको उग्रतारा भगवती मन्दिरमा हरेक वर्ष लाग्ने मेला देहीजाँत बिहिबार रतेडी र शुक्रबार दिउसेडी हुदै छ । कोरोना भाईरस संक्रमण जोखिमले गत वर्ष नित्यपुजामा सिमित देहिजाँत यस वर्ष भने पूर्ण रुपमा हुने भएको छ । मेलामा जो सुकैले पनि व्यपार व्यवसाय गर्न पाउने छन ।
यस अघि प्रशासनको निर्देशनमा व्यापार व्यवसाय रोक लगाउन भनिएको थियो । यस अघि सम्पन्न भएका मेला शैलेश्वर, कैलपालमाण्डौ, बडालजाँतमा निर्वाध रुपमा व्यापािर व्यवसाय भएकाले देहिजाँतमा पनि जो सुकैले पनि व्यपार व्यवसाय गर्न पाउने उग्रतारा क्षेत्र विकास समिती अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले बताए ।
बडाल मेलामा प्रमुुख जिल्ला अधिकारी, रणदल गणका गणपति लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले नै सहभागित जनाए पछि उग्रतरा मेला हुने व्यापार व्यवसायमा कुनै रोकतोक नलगाईने भएको हो । विगतका वर्षहरुमा एक मिटर जमिनमा पसल राख्न पाँच सय रुपैयाँका दरले स्टल बिक्रि गरिन्थ्यो । यस वर्ष पनि त्यही नियम लागु हुन सक्ने समितीका कोषाध्यक्ष श्याम ओझाले बताए । मेलामा एक हजार भन्दा बढी स्टल बिक्रि हुने गरेका छन ।
स्थानिय उत्पादनलाई निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराईने छ भने भारतिय व्यापारीलाई तिन हजार सम्म शुल्क लगाईने समितीका अध्यक्ष साँकीले बताए । स्थान हेरेर पाँच सय देखि तिन हजार सम्म शुल्क तोकिएको उनको भनाई छ ।
उग्रतारामा कार्तिक शुक्ल पूर्णीमाको रातमा रतेडी र दोस्रो दिन दिउसेडी लाग्ने गर्दछ । रतडी पछि बिहान चार बजे धार्मिक परम्परागत रुपमा दाईन दमाह, रुईसिंग, बिकुल, भोकर, शंक, घण्टा ईत्यादी बाजागाजाका साथ चार वटा गाउँबाट माता भगवतीको डोली सहित देउरो उग्रतारा मन्दिरमा पुगे संगै भगवती माताको पुजन शुरु हुन्छ । साढे बजे तिर पुजन सकिए पछि भक्तजन एवं धार्मिक आस्थावानहरुलाई पुजारीले होम गरि बनाईएको तिलाख प्रशाद वितरण गरिन्छ । बिहानको पुजा आजा पछि दिउसो भगवती माताको गाँज मन्दिर लगायत सयौ एकडमा फैलिएको मैदानको बिषेश चार स्थानमा बाजागाँजाका साथ घुमाईन्छ । बिहान चार वटै गाउको भ्राणबाट ल्याईएको माताभगवतीको देउरो बेलुका पाँच बजे पछि पुनः चार वटै गाउको भ्राणमा लगे पछि मेला सम्पन्न हुन्छ ।
डडेल्धुरा सदरमुकामबाट ४ किलोमिटर टाढा अमरगढी नगरपालिका–८ को सुन्दर डाँडामा उग्रतारा भगवतीको मन्दिर अवस्थित छ । उग्रतारा मेला व्यपार व्यवसाय र आफन्तजन संगको भेटघाट हुने समय मौकाको रुपमा प्रख्यात छ । मेलामा हराउदै गएका अन्न वाली फाँपर, भिमुर, तिमुर, तिल लगातय अदुवा, बेसार, चुक, मह, ध्यु, सुन्तरा, मौसमी, केरा लगायत स्थानिय स्तरमा उत्पादित विभिन्न चिज वस्तु संगै मोही बनाउन प्रयोग हुने पाथन, विभिन्न साग तरकारी प्याजको बेर्नाको राम्रो व्यापार हुन्छ । उग्रतारा मेलामा बिक्रि वितरण गर्ने पुर्व योजनाका साथ स्थानियहरुले विभिन्न बाँस निगलाका सरसामाग्री संगै खाद्य वस्तु एवं कृषि औजार, बेर्ना तयार पार्ने गरेका छन । मेलामा भारतका विभिन्न स्थानका व्यापारिले मिठाईका परिकार बनाई बिक्रि गर्ने गर्दछन ।
किम्बदन्ति अनुसार २५ सय वर्ष पहिला हालको अमरगढी नगरपालिका लटाउली बस्ने साँकी जातिका स्थानीयले हलो जोत्दा शिलामा हलोको फाली लागेर रगत बगे पछि देवी उत्पन्न भएर दर्शन दिईन । त्यस दिन देखि महागौरी दुर्गा र कालीको स्वरुपमा उग्रतारा भगवतीको पुजा गरिँदै आएको जनश्रुति छ । देहिजातको महत्व र रोचक जात्रा भनेको सुदूरपश्चिमको जनजीवन झल्किने बिभिन्न दृष्यहरु, ईष्टमित्र, साथीसङ्गी तथा परिवारजनमा वर्ष दिन अथवा अपूर्व भेटघाट तथा दुःख सुख साटासाट, सुदूरपश्चिमको लोकप्रिय खाना माँडा देहिजाँतमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ । तर भगवतीको गाथाको रुपमा गाईने डेउडा भने खेलिदैन ।
स्थानीय लोपोन्मुख वस्तुको उत्पादनको विक्री तथा प्रबद्र्धनका लागि पनि मेला प्रसिद्ध छ । वर्षमा एक पटक भव्य रुपमा लाग्ने उग्रतारा माताको दर्शन गरेमा प्राकृतिक प्रकोप नहुने, सुख प्राप्ती, मनोकामना पूरा हुने जन विश्वास रहीआएको छ । उग्रतारा देवीको मन्दिर पश्चिम नेपालकै एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठका रुपमा रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन ।
माओवादी केन्द्रको अजयमेरुको वडा कमिटी दोश्रो अधिवेशन समपन्न
डडेल्धुरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अजयमेरु गाउपालिका वडा नम्बर ४ को वडा कमिटीको दोश्रो अधिवेशन रतन सिह ऐरको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष टिकेश्वरी बिष्ट र सचिवमा जय बहादुर बिष्ट सहित २९ सदस्यीय समिती चयन गर्दै भएकोछ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पार्टीका सुदुरपश्चिम कमिटी सदस्य उमेश भट्ट विकास रहेका थिए साथै सो कार्यक्रम को संचालन वाइ.सि. एल. नेपालका प्रदेश कमिटी सदस्य भोज राज भट्टले गरेको अखिल क्रान्तिकारीका जिल्ला उपाध्यक्ष तारा दत्त भट्ट ले जानकारी दिनु भयो ।
अधिवेशनमा २५ जना पालिका प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता तारा दत्त भट्ट भने सानो उमेरमा पालिका प्रतिनिधि मा छनोट भएका छन ।